Duqa Muqdisho oo ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday waqooyiga Muqdisho – Banaadir Times
Duqa Muqdisho oo ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday waqooyiga Muqdisho
By banaadir 28th December 2020 74 No comment
Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banadiraayaa si kulul uga hadlay dagaalkii maalmo ka hor ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir,waxaa uuna sheegay inuu aad ugu xun yahay falka ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxaa waxaa uu ugu baaqay shacabka inay ka hortagaan dadka korkooda ku dagaalamaya, isla markaana meel uga soo wada jeestaan.
Sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in dowladda ay awood u leedahay in ay tilaabo ka qaato dadka dhibka u geysanaya shacabka, balse uu sheegay in dad badan ay hadhow arrintaasi walaac ka muujin doonaa.
“Dowladdu awood ayay leedahay balse diyaar uma ahan intay idinka idin jiirto inay u tagto wiilashiinna dambiga sameynaya nooga hormara oo la hadla wiilashiinana celiya si looga baaqsado dhibaato dalka ka dhacda ayuu yiri” Guddoomiye Cumar Filish.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ka hadlay kiiska dacwada ee wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda
Wararkii ugu dambeeyay ee Shirka Dhuusamareeb iyo qodobadii maanta looga hadlay